RASMI: AC Milan oo maareeye isboorti u magacowday Massimo Mirabelli – Gool FM
RASMI: AC Milan oo maareeye isboorti u magacowday Massimo Mirabelli
Raage October 5, 2016
(Beijing) 05 Okt 2016 – Sidii la filayayba, AC Milan ayaa maareeye isboorti ka dhigatay ninkii Inter Mialn ugu qaybsanaa dhanka indha indhaynta laacibiinta ee Massimo Mirabelli.
Naadiga ayaa wuxuu bisha soo aaddan sida lagu wado si rasmi ah ugu gacan geli doonaa dallad Chinese ah, kaasoo lagu dhawaaqi doono 20-ka Nofeembar, maalintaasoo ah goorta uu dhacayo kulanka Derby della Madonnina.
Yeelkeede, sharikadda Sino Europe Sports ayaa sii daysey war rasmi ah oo ku aaddan inuu si saaxi ah u socdo dib u dhiska maamulka Milan-ta cusub.
“SES waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo, in isla maalinta heshiiska la saxiixo, uu Massimiliano Mirabelli kusoo biiri doono maareynta AC Milan, isagoo si toos ah ula shaqayn doona guddoomiyaha cusub ee Marco Fassone isagoo la xaali doono wixii la xiriira maareeynta ciyaaraha iyo suuqa.
“SES waxay sida ugu diirran usoo dhowaynaysaa Massimiliano oo ay nasiib wacan u rajaynayso shaqadiisa cusub.” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay SES oo ah sharikadda la wareegaysa Milan.
DAAWO: Didier Drogba oo qaadaya hees RAP ah oo uu walaalkii leeyahay
“Suarez wuxuu iga codsaday inaan maaliyadeyda u badelo.”. Jamie Vardy